Football Khabar » ब्राजिलविरुद्ध अर्जेन्टिना : मेस्सीका लागि के छन् प्रशिक्षकका योजना ?
ब्राजिलविरुद्ध अर्जेन्टिना : मेस्सीका लागि के छन् प्रशिक्षकका योजना ?
ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलमा दुई दिनपछि आयोजक ब्राजिल र पाहुना टोली अर्जेन्टिना पहिलो सेमिफाइनल खेलमा भिड्दैछन् । स्टार खेलाडीले भरिएका दुई टिमको भिडन्त हुने यस खेललाई प्रतियोगिताभरिकै सबैभन्दा आकर्षक खेलका रूपमा हेरिएको छ । यी दुवै टिम उपाधि दाबेदार टिम भएकाले पनि यो खेल ब्राजिल र अर्जेन्टिना दुवैका लागि प्रतिष्ठाको खेल पनि हुनेछ । उनीहरू दुवै एकअर्कालाई पन्छाएर उपाधिनजिक पुग्ने दाउमा छन् । धेरैजसोले यही खेलको विजेता टिमलाई च्याम्पियन बन्ने टिमका रूपमा पनि हेरेका छन् ।
जारी प्रतियोगितामा ब्राजिल उत्कृष्ट लयमा देखिएको छ । ऊ आफ्नै घरमा खेलिरहेकाले पनि ऊसँग उपाधि जित्न उच्च मनोबल छ । किनभने, ऊसँग आफ्नो मैदान र घरेलु दर्शकको साथ छ । ऊसँग हरेक पोजिसनबाट खेल्न एकसे एक खेलाडी छन् । यता, अर्जेन्टिना भने कठिन अवस्थाबाट सेमिफाइनल पुगेकाले उसले समूह चरणबाटै ठूलै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । यद्यपि, अर्जेन्टिना पनि अहिले उपाधिको होडमा खडा छ । ऊसँग अनुभवी र युवा खेलाडीको राम्रो संयोजना रहेको छ । उसको टिममा बार्सिलोनाका सुपरस्टार लिओनल मेस्सी, म्यानचेस्टर सिटीका सर्जियो अगुएरो, पिएसजीका एन्जल डि मारिया र युभेन्टसका पाउलो डिबालाजस्ता खेलाडीको साथ छ ।
अर्जेन्टिना सेमिफाइनलसम्म पुग्दा कप्तान लिओनल मेस्सीको व्यक्तिगत प्रदर्शन ज्यादै सामान्य मात्रै रह्यो । उनले समूह चरणमा १ गोल पेनाल्टीबाट गर्नुबाहेक थप गोल गर्न सकेनन् । जसका कारण उनको कमजोर प्रदर्शनको आलोचना भइरहेको छ भने उनको टिममाथि पनि दबाब बढेको छ । तर, अब सेमिफाइनल र फाइनल पुगे त्यहाँ उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आफ्नो लय समात्ने अपेक्षा फ्यानहरूले गरेका छन् । अर्जेन्टिनालाई महत्त्वपूर्ण चरणमा पार लगाउन मेस्सी चम्किने धेरैको अपेक्षा छ । तर, मेस्सी स्वयं भने यतिबेला टोलीमा ठूलै संघर्ष गरिरहेका छन् । आफूले राम्रो गर्न नसकिरहेको कुरा उनी स्वयंले पनि स्वीकारेका छन् ।
यस्तो अपेक्षा फ्यानहरूको मात्रै हैन, अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक लिओनल स्कालोनीको पनि छ । खेलको दुई दिनअघि अर्जेन्टिनी मिडियासँग बोल्दै स्कालोनीले ब्राजिलसँगको खेलबारे प्रतिक्रिया दिएका छन् । स्कालोनीले सेमिफाइनल खेल निकै कठिन र रोमाञ्चक हुने बताएका छन् । ‘यो खेल दुवैका लागि आधा–आधा सम्भावना रहन्छ । तर, दर्शकहरूले पनि यो खेलबाट भरपुर मनोरञ्जन लिनेछन्,’ स्कालोनीले भने, ‘हामी अझै पनि ब्राजिललको सामना कसरी गर्ने भनेर रणनीति निर्माणमै छौं । हामीसँग अझै दुई दिनको समय बाँकी छ । हामी यो बीचमा अन्तिम तयारी गर्ने छौं ।’
स्कालोनीले ब्राजिलसँग उसको घरमा खेल्नुपर्ने हुँदा आफूहरू स्वभावैले दबाबमा हुने बताए । तर, आफूहरूसँग विश्वस्तरका खेलाडी भएकाले प्रतिस्पर्धा अवश्य हुने बताए । ‘सबैलाई थाहा छ, यो खेल निकै कठिन हुनेछ । किनभने, ब्राजिल आफ्नो मैदान र दर्शकसामु खेल्नेछ,’ स्कालोनीले भने, ‘तर, हामीसँग पनि मेस्सीजस्ता विश्वस्तरका खेलाडी छन् । अन्य स्टार खेलाडी छन् । हामीसँग राम्रा खेलाडीको अभाव छैन । हामीसँग जितका लागि चर्को भोक छ । हामी यसपटक जसरी पनि यो प्रतियोगिता जितेर उपाधिको खडेरी अन्त्य गर्न चाहन्छौं ।’
स्कालोनीले मेस्सीको कमजोर प्रदर्शनबारे पनि बोले । त्यसक्रममा उनले मेस्सकिो बचाउ गर्दै उनले आगामी खेलमा सही लय समात्ने बताए । ‘कोपामा आफूले उत्कृष्ट दिन नसकिहेको मेस्सी आफैंलाई पनि थाहा छ । अवश्य पनि, एक खेलाडीले हरेक समय एकैनासको प्रदर्शन गर्न सक्दैन । तर, मेस्सीजस्ता खेलाडी लामो समयसम्म लयहीन रहन सक्दैनन्,’ स्कालोनीले भने, ‘अबका खेलमा उनले आफ्नो क्लब फुटबलको लय समात्नेमा म ढुक्क छु । टिमले पनि उनीबाट ठूलो अपेक्षा गरेको छ । मलाई लाग्छ– अबका दुई खेल मेस्सीका लागि हो । जहाँ उनले आफ्नो जादु देखाउनेछन् ।’
स्कालोनीले ब्राजिलविरुद्ध मेस्सीजस्ता खेलाडीको भूमिका ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुने पनि बताए । यदि सो खेलमा मेस्सीले देखिने गरी योगदान दिन नसके टिम समस्यामा पर्न सक्ने पनि स्वीकारे । ‘ब्राजिलविरुद्धको खेल हाम्रा लागि फाइनलसरह हुनेछ । यो खेल जसले जित्छ उसले उपाधि जित्ने दाबेदारी राख्छ । तसर्थ, यस खेलमा मेस्सीबाट ठूलो अपेक्षा छ,’ स्कालोनीले भने, ‘यस खेलमा मेस्सीको योगदान रहनु अतिआवश्यक छ । हामी उनको मनोबल उच्च राख्न चाहन्छौं । उनले राम्रो प्रदर्शन गर्दा टिमलाई जित्न समस्या पर्दैन । ’
स्कालोनीले ब्राजिलविरुद्ध मेस्सीलाई मैदानमा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने आफूले योजना बनाइरहेको पनि बताए । ‘ब्राजिलविरुद्ध मेस्सीलाई कसरी उतार्ने भन्नेमा हामी रणनीति बनाइरहेका छौं । उनले आफ्नै तरिका र शैलीले खेल्नेछन् । तर, मैदानको रणनीतिमा हामी यस खेलमा केही नयाँ गर्नेछौं,’ स्कालोनीले भने, ‘मेस्सीजस्ता खेलाडी टिममा हुनु निकै बलियो पक्ष हो । उनको उपस्थितिले विपक्षी टिममाथि दबाब बढ्छ नै । यस्ता ठूला प्रतियोगितामा ठूला टिमविरुद्ध मेस्सीले झन् ठूलो महत्त्व राख्छन् । यो कुरा ब्राजिलले पनि बुझेको हुनुपर्छ । ’
पहिलो सेमिफाइनल खेल बुधबार बिहान हुनेछ । सो खेलमा ब्राजिल र अर्जेन्टिना खेल्दा अर्को दिन बिहीबार हुने खेलमा चिली र पेरु खेल्नेछन् । सेमिफाइनल खेलपछि तेस्रो स्थानका लागि र फाइनल खेल हुनेछ । सेमिफाइनलका विजेताले फाइनल खेल्नेछन् भने पराजित हुने टिमले तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । फाइनल खेल जुलाई ८ तारिखका दिन हुनेछ । त्यसअघि तेस्रो स्थानका लागि जुलाई ७ तारिखमा हुनेछ ।
प्रकाशित मिति १६ असार २०७६, सोमबार १५:५१